Inona ireo fomba hahazoana ireo lamosina avo lenta amin'ny dofollow amin'ny blaogy?
Ny blaogy Commentluv dia fomba mahazatra hahazoana rindry avo lenta avo lenta avo lenta izay matetika tsy nampidirina ny webmaster. Ity lohahevitra ity dia hifanohitra foana amin'ny resaka. Ny bilaogy Commentluv dia manome ny tombony ho an'ny tompon'ny tranonkala raha manampy amin'ny fananganana rohy matanjaka izy ireo rehefa mamerina rohy mampiseho ny iray amin'ireo lahatsoratra bilaoginao.
Hodinihinay ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba tena ilaina amin'ny fomba hanamboarana lahatsoratry ny dofollow avo lenta amin'ny blaogy commentluv.
Aleo aloha hifanakalozanay hevitra ny bilaogy commentluv sy ny toerana hahitana azy ireo. Ireo karazana bolongana ireo dia ahafahanao mampifandray indray ny iray amin'ireo lahatsoratra amin'ny blôginao ary mizara sira mifandraika amin'ny serasera amin'ny pejy web anao. Ny ankamaroan'ny webmasters dia milaza fa ny backlinks dofollow dia manan-danja kokoa noho ny nofinofisin'ny tranokala. Na izany aza, samy manana ny tombontsoan'izy ireo ny roa amin'ireto karazana traikefa ireto. Mba hamoronana profil-rohy malaza, mila mamorona rindranoka dofollow sy nofollow ianao. Raha ny fitsipika, ny backlinks nofollow ao amin'ny tranokalan'ny PR dia miteraka rindran-dofolam-bola vaovao ary manangona ny fifamoivoizana amin'ny tranokala. Raha mamerina rohy mankany amin'ny blôginao na tranokala ianao, dia tokony ho tadidinao fa ny backlinks dia hatao amin'ny alàlan'ny paikady tsara eritreritra toy ny manatsara ny fahitana ny blôginao.
Tiako i Neil Patel hevitra hanorina rohy. Nahita hevitra iray momba ny fanorenana rohy izy amin'ny fomba mahavariana. Ity fomba ity dia manome fahafahana anao hanara-maso ny fahaiza-manaonao sy handray fepetra iray raha mbola tsy miasa ny drafitra iray.
Noho ny Google updates matetika ny algorithm updates, ny ankamaroan'ireo mpitoraka blaogy dia manapa-kevitra ny hampifandray ny rohy nofafana amin'ny fiahiahiana ho an'ny karoka fitadiavana. Na izany aza, mbola misy ihany ny bilaogy commentluv mbola misy ary manome tompon'ireo tranonkala manana backlinks dofollow ambony.
Amin'ny ankapobeny, ny fandefasana bilaogy dia fomba tsotra hananganana backlinks. Ity fomba fitsaboana ity dia nahitana tambajotra maro nahomby, ary raha vita tsara izany, dia mitondra vokatra tsara momba ny fifamoivoizana, ny fizarana, ary ny fiovam-po. Mila mandray ny fananganana rohy ianao amin'ny maha-fitaovana fananganana fifandraisana. Amin'ny voalohany dia tsy hanome tombony anao izany. Na eo aza izany dia mety ho afaka hanangana fahefana ianao ary hitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.
Ny sasany amin'ireo mpitoraka bilaogy dia mametra ny isan'ny fanehoan-kevitra ho an'ny lahatsoratra tsirairay. Izy ireo dia mamela ny famolavolana dofollow ho an'ny mpaneho hevitra voalohany. Ny manampahefana bilaogy manokana dia manapa-kevitra raha hankasitraka anao dofollow backlinks na tsia. Raha mahita maromaro momba ny spammy avy amin'ny tranokalanao izy ireo, dia azo inoana fa mandrara anao hametraka backlinks dofollow ao amin'ny bilaoginy. Na izany aza, raha mahita ny fanehoan-kevitra voarainao izy ireo ary manan-danja amin'ny lohahevitra noresahina dia hanome loka anao miaraka amin'ny backlinks dofollow isaky ny maneho hevitra momba ny bilaogin'izy ireo ianao.
Soso-kevitra hamoronana backlinks dofollow ao amin'ny blaogy Commentluv
Voalohany indrindra, miezaha tsy hijery spammy. Mba hamoronana laza tsara ao amin'ny bilaogy iray, mila mandao kalitao sy valiny mahasoa ianao. Ataovy azo antoka tsara fa mamaky lahatsoratra ianao ary mahatakatra ny lohahevitra. Raha tsy izany dia hanoratra fanehoan-kevitra ianao izay tsy mifikitra amin'ny teboka ary manjary tsy mahazatra. Ankoatra izany aza, aza manandrana manangona orinasanao an-tserasera amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra misy anao amin'ny indostria. Hoesorina ianao amin'izany ary tsy hahazo fotoana hahazoana ny backlinks dofollow ao amin'ity blôgy ity. Tokony hiezaka ny tsy hanakan-dàlana amin'ny rohy linklinks ianao satria mety hijery tsy ara-boajanahary sy spammy. Ankoatra izany, manoro hevitra anao aho mba hisoroka tsikera iray sy roa Source .